Mac အတွက် Pages အတွက် underline အင်္ဂါရပ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ ငါက Mac ပါ
Mac အတွက် Pages အတွက် underline အင်္ဂါရပ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
Javier Porcar | | Mac က App Store ကို, လဲ tutorial, အတော်ကြာ
Mac ပေါ်ရှိလတ်တလောအသုံးပြုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့တွင်အခြေခံလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောရုံးသုံးကိရိယာများရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအလုပ်များသို့ဝင်ရောက်နိုင်သော်လည်း
iWork ဟုလူသိများသော“ သက်ကြီးရွယ်အိုများ” application application package အကြောင်းပြောနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စာမျက်နှာများ၊ နံပါတ်များနှင့် Keynote ရှိသည်။ စာမျက်နှာများသည်ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသော၊ ဒီနေ့ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလိမ့်မယ် toolline (သို့) ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းမှအလျင်အမြန်မည်သို့မည်ပုံအလုပ်လုပ်ရမည်.
သင့်မှာမရှိဘူးဆိုရင်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်ရာ download လုပ်ထားသောစာမျက်နှာများ အဲဒါကို Mac App Store မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖွင့်လှစ် သိုမဟုတ်ရေးသားရန် (စာလုံးဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုသင်တင်သွင်းနိုင်သည်)
ယခု cursor ၏အကူအညီဖြင့်သင်မှတ်သားလိုသောအပိုင်းကိုအမှတ်အသားပြုပြီး၎င်းကိုအပြာဖြင့်ဖော်ပြလိမ့်မည်.
ပြီးရင် toolbar ကိုသွားပြီးအပေါ်ကိုနှိပ်ပါ ထည့်သွင်း။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည် မီးမောင်းထိုး။ ၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောစာသားကိုအဝါရောင်ဖြင့်ပြလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပိုမိုသောစာသားကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်မှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ စာသားနှင့်ခလုတ်များအကြားပေါ်လာလိမ့်မည် comment bar။ သင်မီးမောင်းထိုးပြသည့်ခလုတ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပွိုင့် ၂ တွင်ရှိသည့်စာသား၏အစိတ်အပိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုအမှတ်အသားပြုပြီးမှတ်ချက်ဘားတွင် Highlight ကိုနှိပ်ပါ။ သင်လိုချင်သောအပိုင်းအားလုံးကိုမှတ်သားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
ဒါပေမယ့် keyboard shortcut ကိုအမြဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ စာသားကိုအချက် ၂ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းမျဉ်းသားဖော်ပြရန်နှင့်အောက်ပါကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းကိုနှိပ်ပါ။ Shift + Cmd + H။ ဤအရာပြီးဆုံးပါကမှတ်သားထားသောစာသားသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ့ကိုဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုအံ that စေဆုံးရွေးစရာ မျဉ်းသားစာသားကိုဖျက်ခြင်းသည်တူညီသောမျဉ်းစာသားကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ပေါ်လာသောဆက်စပ်မီနူးပေါ်မှပယ်ဖျက်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ ရိုးရှင်းပါတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » အတော်ကြာ » Mac အတွက် Pages အတွက် underline အင်္ဂါရပ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
ကားလို့စ် ဂျင်နက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
Carlos Jimenez ကိုပြန်ပြောပါ
မျဉ်းသား၏အရောင်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ? ဒါမှမဟုတ်အဝါရောင်ကိုသာအထောက်အပံ့ပေးသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Noregalodates ။ ဟုသူကပြောသည်
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က Apple Watch ကိုဆေးပညာတွင်အသုံးပြုရန်အားပေးသည်
Musique သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အတွက်အခြားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်